बैंग्लोरमा चिकित्सकहरुले एकजना स‌ंगितकार अभिषेक प्रसादको मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिरहँदा उनी भने गितार बजाउँदै शल्यचिकित्सकलाई सघाइरहेका थिए । अभिषेकलाई विगत ९ महिनादेखि गितार बजाउँदा औंलाहरु बाउडिने समस्या थियो । जसको उपचारका लागि चिकित्सले उनको शल्यक्रिया गरिरहँदा उनले गितार बजाइरहे ।
क्यामेरा जोगाउने कि ज्यान ?
क्यामेरा जोगाउने कि ज्यान ? केहीले भने, ‘ज्यान जोगाउनुपर्छ’ । अर्को थरीको मत थियो, ‘फोटो पनि त खिच्नुपर्‍यो ।’
खोला तर्न राँगा गाडी
कैलालीको जानकी गाउँपालिका–७ भुर्सा खोलामा मोटरसाइकल तार्न गाउँलेको राँगा गाडा तयार गरेका छन् । मुनुवा गाउँबाट टीकापुर आउने र फर्कनेको मोटरसाइकल, साइकल तथा पैदल यात्रु राँगा गाडामा चढेरै खोला पार गर्छन् । भुर्सा खोलामा पुल निर्माण भइरहेको छ ।
मेचीनगर–१५ मेचीपारिको ग्वालबस्तीका विद्यार्थी आफैं स्कुल आउँदैनन्, बोलाएर ल्याउनुपर्छ । भारतसँग सीमा जोडिएको यो गाउँका विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्न सरकारले २०५७ सालबाट विद्यालय सञ्चालन गरेको हो ।
‘बधाई पाँच वर्षपछि’
‘आज म कसैलाई बधाई दिन्नँ, अबको पाँच वर्षपछि बिदा गर्दा मात्र दिनेछु, जति बेला लाखौं जनता बिदा गर्न फूलमाला लिएर तयार हुनेछन् ।’ नगर प्रमुख पदमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएपछि मोरङ लेटाङ नगरपालिकाकी एमाले नेत्री एवं शिक्षिका शान्ति पाख्रिनले लेखेको फेसबुक पोस्ट हो यो ।
नेपालीलाई अन्तरिक्ष यात्रामा जाने मौका
नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाईटी (नासो) ले ‘टेराज्त्रा स्पेस एक्सप्लोरेसन’ सँगको सहकार्यमा नेपालबाट तीनजनालाई अन्तरिक्ष यात्राको तालिममा सहभागी गराउने जनाएको छ । उक्त सहभागिताको लागि नेपाली नागरिकको लागि ‘प्रोजेक्ट टेरानट’ को नि:शुल्क पूर्व आवेदन साउन १६ गतेसम्म खुलाइएको छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको लागि आवेदनको खुलाइएको हो ।
जब एक दर्जन सिंहले एम्बुलेन्स घेरे...
भारतको गुजरातमा एक महिलाले करिब एक दर्जन सिंहले घेरिएको एम्बुलेन्सभित्र बच्चा जन्माएकी छन् । यो घटना शुक्रबारको हो । गुजरातको लुनासापुर गाउँकी मन्गुबेन मक्वाना नामकी महिलालाई अचानक प्रसव व्यथा लागेपछि उनका आफन्तले एम्बुलेन्सबाट अस्पताल लैजाँदै थिए ।
जाँचै नदिएको विषयमा रिजल्ट
मनकामना इंग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट सिम्बल नम्बर ‘०२८४५६४ टी’ भएका सन्देश सांगामीले एसईई परीक्षामा ऐच्छिक गणित विषयको परीक्षा दिए । तर, शुक्रबार प्रकाशित एसईईको परीक्षाफलमा भने उनको ऐच्छिक गणितको स्थानमा अर्थशास्त्रको नतिजा आयो ।